ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - အဆိုပါနေ့၏ကတော့
https://www.funneloftheday.com/ အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy ကိုယူ. ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒက ကျွန်တော်စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘယျသို့သတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြထားတယ်ငါတို့သည်အဘယ်သို့အသုံးပြုရန်. ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ရေးမူဝါဒများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဤ privacy ကိုမူဝါဒအ primer ကိုကြည့်ပါ.
အားလုံးကို web server များကသူတို့ဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ကိုခြေရာခံ. ဤအချက်အလက်ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မထားဘူး, IP လိပ်စာများ, ဘရောက်ဇာကိုအသေးစိတျ, timestamps တွေကိုနှင့်ရည်ညွှန်းစာမကျြနှာ. ဤအချက်အလက်များ၏အဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီ site ကိုမှတိကျသောဧည့်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်. သတင်းအချက်အလက်များလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခြေရာခံနေသည်.
ကွတ်ကီးနဲ့ Web Beacons
အဘယ်မှာရှိလိုအပ်သော, https://www.funneloftheday.com/ ပိုကောင်းဧည့်သည်အစေခံနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာနှင့်အတူဧည့်သည်ကိုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးဧည့်သည်ရဲ့ဦးစားပေးများနှင့်သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ကွတ်ကီးကိုအသုံးပြုသည်.
သငျသညျ privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင် cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့သင့် browser setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ. အချို့ဆိုဒ်များသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းငှါအဖြစ်အားလုံး sites များအတွက် cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်မဟုတ်. အကောင်းဆုံး option ကိုတစ်ဦးနှုန်း-site ကိုအခြေခံပေါ်မှာ cookies တွေကို disable သို့မဟုတ် enable ရန်ဖြစ်ပါသည်. သင့် browser စာရွက်စာတမ်းများ cookies တွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်များနှင့်အခြားခြေရာခံခြင်းယန္တရားများအဘို့အတိုင်ပင်ဆွေးနွေး. web browser ကို privacy ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလင့်များဒီစာရင်းထဲမှာလည်းအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်.
ဒီ privacy ကိုမူဝါဒအကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုထပ်မံရှင်းလင်းချက်များအတွက် [email protected] ဖို့ညွှန်ကြားထားနိုင်ပါတယ်.